Barnamujka caawa Radio Xoriyo ka baxaya waxuu ka koobanyahay
Ø Dagaalo dhex maray Ciidamada Cadawga Gumaysiga Itoobiya iyo Ciidanka Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya.
Ø Shir balaadhan oo ay yeesheen Xubnaha Jaaliyada Suudaan.
Ø Ciidamadii safka hore ee Itoobiya oo Maqale loo soo raray si ay nabad galyada Meles sugaan.
Ø Lacag la sheegay in ay Yurub ugu deeqday doorashooyinka Itobiya oo Meel ay martan aan la ogeeyn.
Ø Seminar ay soo abaabuleen dad reer Eritrean ah oo lagu qabtay wadanka Denmark.
Ø Laba duuliye oo Itoobiya ka baxsaday.
Ø Barnaamujkii Halgan iyo halgame oo aanu ku soo qaadanayno qaybtii sadexad ee waraysigii aanu la yeelanay Mudane Maxamuud Ugaas Muxumed iyo Mudane Axmed C/laahi iyo waliba Suugaan halgameed
Dagaalo dhex maray Ciidamada Cadawga Gumaysiga Itoobiya iyo Ciidanka Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya.
Dhamaadkii bishii hore dagaal ay Geesiyaasha Ciidanka xoreeynta ogaadeenya ku qaadeen saldhig ay ciidamada nacabka gumaysiga Itoobiya ku lahaayeen Biya xidheenka Goday, ayaa waxaa ciidamada xaqdarada ku caanbaxay ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay 4
07.09.2003 weerar dhabogal ah oo ay ciidamada wadaniga Xoreeynta Ogaadenya ku qaadeen ciidamada cadawga Itoobiya oo marayay Dharkanley oo u dhexaysa Dhagax-Buur iyo Dhagax-Madaw ayaa waxaa ciidamada Itoobiya lagaga dilay 8 Askari waxaana lagaga dhaawacay 14 Askari oo kale.
Shir balaadhan oo ay yeesheen Xubnaha Jaaliyada Suudaan.
Shir Balaadhan ooy isugu yimaadeen Xubnaha Jaaliyadda iyo Unugu Jwxo, ee Wadanka Suudaan 13 Sept,2003 ayaa lagu dhisay Maamul Cusub oo Daadihin doona Hawsha Jaaliyada. Shirkaas ooy ka soo qayb Galeen dhamaan Laamaha Kala Duwan ee Jaaliyada reer Ogadenya ee Sudan iyo Xubnaha unuga JWXO waxaa laysla lafa Guray Dhamaan sidii loo huru Marin lahaa Halganka Gobanimo doonka ee Kasocda Ogadenya ee ay Majaraha U hayso JWXO, Waxaa Warbixino la Xidhiidha Wax Qabadkii Jaaliyadda ee Sanadkii tagay soo Jeediyey Xubnihii Gudida ee Hawshaas hayey, waxaana mahad balaadhan looga soo jeediyey Munaasibada Shirka Xubnaha Gudidaas, waxaa sidoo kale halkaa lagu doortay maamul cusub oo halkaas kasii wadi doona hawlih jaaliyada iyo tan halgankaba, waxaana lagu dhiiri galiyaya in ay xilkooda ugutaan si xilkasnimo iyo firin fircconi leh.
Ciidamadii safka hore ee Itoobiya oo Maqale loo soo raray si ay nabad galyada Meles sugaan.
Warka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ayaa sheegaya in amaanka magaalada si aad ah loo adkeeyay iyada oo laga cabsi qabo in weerar lagu so qaado kaligii taliye Malese Zanawi, cabsidan ayaa kadambaysay kadib markii ay soo baxeen kooxo aad uga cadhaysan dilka iyo xadhiga uu u geestay
kaligi taliye Malese saraakiishii TPLF ee maamulkiisa ka soo horjeetay.
Sidookale waxaa magaalada maqale iyo nawaaxigeeda la soo dhoobay ciidamadii ku teedsanaa xuduuda Eritrea iyo Itoobiya si ay u ilaaliyaan amaanka shirka halkaas uga socda Xisbiga TPLF.
Shirkan ayaa aad laysugu khilaafsan yahay, waxaana laga yaabaa in uu gacan kahada ka dhasho labada kooxood ee la kala safan Zenaawi iyo wasiirka Arimaha dibada Seayum Madfin oo si xoogan isaga
soo hor jeeda. Ciidamada nabad sugida ee Meles ayaa waxay aad uga taxadarayaan in ay rabshado halkaas ka dhashaan waxayna aad ula socdaan dhaqdhaqaaqa kooxaha ay ku tuhunsanyihiin in ay ka soo horjeedaan Melis Zenaawi, iyagoo waliba dhagaysanaya Telefoonada ay dadku isudirayaan.
khudbad dheer uu kaligii taliye Meles ku furay shirkaas ayay Daadka siyasada indha indheeya ku tilmaamay in ay ahayd mid caajis badan oo aan wax nuxur ah xanbaarsanayn, waxyaabaha u ka hadlayna waxay ahayeen waxyaabihii awalba lagu yaqiinay sida khilaafka Ethio-Eritrea, abaaraha soo noqnoqonaya & waxa uu dimoqraadiyada ku tilmaamay.
Lacag la sheegay in ay Yurub ugu deeqday doorashooyinka Itobiya oo Meel ay martan aan la ogeeyn.
Wariyaha wakaaladda wararka ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in u shaaca ka qaaday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Itoobiya Asafa Birru, in aysan jiran lacag ay ugu deeqday midowga Yurub oo lagu horumarinayo arimaha doorashooyinka. Gudoomiyihu waxaa kaloo uu sheegay
in ay dhibaato u keeni karto xisbiyada doorashada ka qaybgalaya hadaysan lacagtaas nasoo gaadhin.
Todobaadkii hore ayaa warbaahinta Aduunka lagu faafiyay in midawga yurub ugu deeqay Itoobiya lacag gaadhaysa 500 oo kun oo Euro, lacagtaas oo lagu abaabulayo doorashooyinka lafilayo in ay ka dhacaan
sanadka 2004 wadanka Itoobiya. Warkaas ka soo baxay gudiga doorashooyinka ayaa waxuu dhalinayaa tuhun laga qabo in ay xukuumadu lacagtaas sikale u isticmaashay.
Laba duuliye oo Itoobiya ka baxsaday.
Joornaal magaciisa layidhaado Sayfenabalbal ayaa waxuu sheegay in ay dawlda Itoobiya ka baxsadeen Laba duuliye. Duuliya yaashan oo lakala odhan jiray Hadhis ALAalamayow iyo corenel Minilik Dasalayn waxa ay wax barasho u joogeen wadanka Taalyaaniga, hasayeeshee waxay wararku sheegayaan in ay magangalyo siyaasadeed ka codsadeen wadanka Talyaaniga. Khuburada u dhuun duleela arimaha Ciidanka ayaa sheegaya in ay Tayada Ciidanka Cirka ee Itoobiya aad hoos ugu dhacday Baxsashada Saraakiisha Ciidamada Cirka ee Itoobiya oo badatay darted.
Seminar ay soo abaabuleen dad reer Eritrean ah oo lagu qabtay wadanka Denmark.
Sida aan kaso xiganay WWO, Seminaar ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyada Eritrea ee Denmark iyo safiirka Eritrea u fadhiya wadanka Denmark ayaa lagu qabtay magaalada Åhrus oo ku taala wadanka Denmark, Seminaarkan ayaa waxa lagag hadlayay arimaha dadka reer Eritrea ee kunool dibada.
Dadkii seminarkaas ka soo qayb galay ayaa uga mahad celiyeen dawlada Eritrea sida ay dadkeeda ugu dadaalayso in ay hurumaraan. Dawlada Eritrea ayaa u magacawday wakiil daneeya hawlaha dadka dibada ku maqan ee u dhashay wadanka Eritrea, Koomishinkaas oo ka caawin doona dadka reerEritrea dhibaayoonka soo wajaha iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska wadankooda hooyo.
Ninn ka mid ah ka soo qayb galayaasha seminaarka ayaa waxa uu yidhi” arintani waxay kor u qaadaysaa horumarinta iyo mooraalka dadka reer Eritre ee ku nool dibada waxayna dareen siinayasaa in wadan leeyihiin.